Site na ebumnuche arụmọrụ nke "ìhè, mkpa, mkpụmkpụ na obere" maka ebe batrị dị iche iche, ndị na-emepụta batrị akwalitela ma gbanwee dịka usoro ụlọ ọrụ mba. Batrị ike na batrị nchekwa ume abụrụla ogige ọhụrụ maka ndị na-emepụta batrị. Iji nagide nkwalite na mgbanwe nke ụlọ ọrụ batrị, Anbotek emewo ka akụ na ụba ya sie ike na batrị nchekwa nchekwa yana ụlọ nyocha batrị ike n'afọ ndị na-adịbeghị anya, zuo oke ihe nyocha na akụrụngwa batrị zuru oke, webata ndị injinia batrị na ndị ọkachamara batrị, wee bụrụ onye ndu na ulo oru ohuru ohuru. Debanye nkwekọrịta nkwekọrịta nkwekọrịta.
Ike Ime Laboratory
• Na-enye akụkọ nyocha na asambodo a nabatara nke ụwa niile, ma nyekwa ndị mmadụ ọrụ ngwa ngwa iji gboo mkpa gị ozugbo; Lithium Batrị ibu ụgbọ njem ọnọdụ njirimara (UN38.3) na SDS akụkọ.
• Ọrụ nyocha nyocha batrị, ihe ngwọta ule ọkachamara maka ngwaahịa gị.
• UAV na-atụgharị ụgbọ ala, ụgbọ ịnyịnya ígwè ịgba ịnyịnya ígwè, na ịnwale batrị nchekwa batrị na ihe ngwọta maka ígwè ọrụ na-ebute ụzọ na ụlọ ọrụ ahụ.
• The batrị otu ule ọrụ na-nditịm nwale dị ka ọnọdụ nyere site na ndị ahịa na a ọkachamara akụkọ na-agbala.
• CNAS na CMA kwadoro
• CQC nyere ụlọ nyocha nyocha
• TUV Rheinland CBTL Laboratory, TUV Rheinland PTL Laboratory (UL Witnesslọ Ọrụ Ndịàmà Na-arụ Ọrụ)
• iru eru na ikike maka ndị akaebe batrị Intertek na ụlọ nyocha ụlọ ọrụ BMS
• TUV SUD nyocha laabu
Batrị Lithium, batrị lithium iron, sistemu nchekwa ụlọ, drone, ighikota ụgbọ ala, igwe eletrik, ụgbọ golf, batrị nchekwa batrị maka robot, batrị nickel-hydrogen nickel-cadmium, batrị acid acid, batrị mbụ (batrị akọrọ), dị iche iche Dijitalụ nke abụọ batrị, batrị nchekwa batrị, batrị ike, wdg;
OA \_ UN38.3 \_ Akụkọ MSDS \_ SDS Report \_ CQC Asambodo \_ GB Report \_ QC Report \_ Asambodo CB \_ IEC Report \_ TUV \_ RoHS \_ European Battery Guide UL \_ FCC \_ KC \_ PSE \_ BIS \_ BSMI \_ Wercs \_ ETL \_ IECEE \_ IEEE1725 \_ IEEE1625 \_ GS